Kobo Aura Edition 2, မမျှော်လင့်ဘဲအံ့အားသင့်ဖွယ် Kobo | eReaders အားလုံး
Kobo Aura Edition2သည်အံ့ surprise စရာကောင်းလောက်သော Kobo ဖြစ်သည်
မနေ့က Kobo မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်သာမက eReader အသစ်ရှာသူတွေအတွက်ပါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ eReaders နှစ်ခုကိုစျေးကွက်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်း၊ အရွယ်အစားသာမကစျေးနှုန်းအတွက်ပါတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားကြသည် အဆိုပါ Kobo Aura တစ်ခုမှာဒါပေမယ့်ငါတို့ဘာမှမသိဘူး Kobo Aura Edition ကို 2နာမည်ရသည့်ရိုးရာ eReader သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလက်ရှိဆွေးနွေးနေသည့် eReader ။
ဒီကိရိယာမှာရှိတယ်6လက်မမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားသည် ၈ လက်မနှင့်အဝေးတွင်ရှိသော်လည်း Kindle Paperwhite 8၊ Cervantes3သို့မဟုတ် Kobo Glo HD တို့ကဲ့သို့သောအခြား eReaders နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့အပြင်များစွာသောသူတို့ကစဉ်းစားပါ Kobo Aura Edition2သည် Kobo Glo HD ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
El Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ...Kobo Aura Edition 2″ /] တွင် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် ပေးစာနည်းပညာtouch screen နှင့် illumination ဖြင့်နည်းပညာ ComforLight နှင့် resolution 1024 x 768 pixels; ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စမှာတော့ Kobo Glo HD လိုမျိုး pixel သိပ်သည်းဆနဲ့တူညီမှုမရှိပါဘူး Kobo Aura Edition2တွင် ၂၁၂ ppi ရှိသည်။ Kobo Glo HD ထက်များစွာလျော့နည်းသည်။
Kobo Aura Edition2သည်ဒီဇိုင်းကို Kobo Aura One နှင့်မျှဝေမည်
Kobo Aura Edition2၏ပုံစံသည် Kobo Aura One နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအရွယ်အစားသေးငယ်သည်။ ၁၅၉ x ၁၁၃ x ၈.၅ မီလီမီတာနှင့် ၁၈၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်အလေးချိန်အလွန်ကြီးသော်လည်း၎င်းသည်ဒီဇိုင်းကိုအခြား eReader နှင့်အတူတူမျှဝေသောကြောင့်ဖြစ်သည် - Kobo eReaders တို့တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာတစ်ခုစီသည်မတူညီသောဒီဇိုင်းရှိသည်။
ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ Kobo Aura Edition2သည်၎င်း၏အစ်ကိုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ Overdrive မှတစ်ဆင့် ebook များငှားရမ်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ Kobo Aura Edition2တွင် microsd ကဒ်များအတွက် slot တစ်ခုတော့မရှိပါ သိုလှောင်မှုပမာဏ4Gb သည်အရေးကြီးသည်.
Kobo Aura Edition2၏စျေးနှုန်းသည် Kobo Glo HD နှင့်ဆင်တူသော်လည်း ၁၀ ဒေါ်လာခန့်စျေးသက်သာသည်။ ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက်။ ထိုကဲ့သို့သော eReader နှင့်ကျေနပ်သူများအတွက်စျေးနှုန်းနိမ့်သော်လည်း၊ ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော resolution ရှိသောမျက်နှာပြင်ပါသည့် Kobo Glo HD ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ များစွာသောသူတို့သည် Kobo Aura One ကိုရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်။ Kobo Aura Edition2သည်လူများစွာအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာရှာနေသူနှင့်သူတို့၏ eReader တွင်ပါဝါရှိလိုသူများအတွက်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » Kobo Aura Edition2သည်အံ့ surprise စရာကောင်းလောက်သော Kobo ဖြစ်သည်
အယ်လ်ဖရက်ဒို ဂူတီယာရက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ဘာစီလိုနာရှိ FNAC တွင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးပါ။ ငါ FNAC အမှတ်တံဆိပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရှိခြင်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြုတော်မူပြီထင်ပါတယ်။
alfredo gutierrez အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူကိုပြောင်းလဲချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် kobo aura edition2(သို့) Tagus Iris 2017 နှစ်ခုအကြားသံသယဝင်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏သံသယသည်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံများကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ kobo ဟာသူတို့ကိုအမှားရှိခဲ့ရင်စပိန်ကနေပို့ပေးရမယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ငါမသိဘူး။ ဒီနှစ်ခုကနေဘာ ၀ ယ်ဖို့ငါ့ကိုဘာအကြံပေးချင်ပါသလဲ။
မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခုခုသင့်ကိုမအောင်မြင်လျှင် Kobo နှင့်၎င်းတို့သည်စတိုးဆိုင်တွင်တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲကြသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ နှစ်ခုလုံးအကြားတွင် Kobo သည်ပစ္စည်းအတွက်မဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာအတွက်ပါ ၀ င်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မှာရှိတာအားလုံးမှာ Kobo ရှိတယ်၊ Tagus နဲ့ BQ တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။
ငါမော်ဒယ်နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါ့အ Aura ဟောင်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြproblemနာ။ ငါအဲဒီအတွက် Caliber ကိုသုံးတယ်။ caliber-ebook.com ။
ဤ ebook သည်အခြားနာမည်အောက်ရှိ ၂၀၁၂ kobo Glo နှင့်တူညီသည်။ ထိတွေ့မှုနည်းပညာသည်ပင်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် capacitive ထံမှခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှန်ပါသလား။
ငါ Aura မှာပြaနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ ငါအဲဒါကို fnac ဆီခေါ်သွားတယ်၊ အဲဒါကိုသူတို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဆီပို့လိုက်တယ်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ကငါ့ကိုအသစ်တစ်ခုကိုပို့လိုက်တယ်။ ပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှု
ငါ kobo aura2ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါခရီးသွားတော့မယ်။ ဒီအမြင်နဲ့စာဖတ်တာကိုသဘောကျတာကငါ့အတွက်အခက်တွေ့လိမ့်မယ်။ အလွန်နှေးသည်၊ ကွန်ပျူတာ၏အစသို့ပြန်သွားခြင်းကဲ့သို့ k အလွန်လေးသောစာအုပ်များကိုသာရွေ့ရသည်။ သင်၌ရှိသည့်မည်သည့်စာအုပ်များကိုစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်စုစည်းခြင်းသည်ရိုးရှင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်နှေးကွေးပြီးရှုပ်ထွေးသည်၊ ထိတွေ့မှုသည်ကျိုးနပ်ပါသည်၊ သင်ပစ္စည်းများကိုလျှော ချ၍ ရွေးချယ်သည်၊ သင်မျက်နှာပြင်ကိုထိသည့်အခါနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အံ့သြလောက်အောင်နောက်ကျသွားသည်။ စာမျက်နှာများ၊ စာသားများသည်မျက်နှာပြင်အကျယ်နှင့်အလိုလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်ပါ။ သင် zoom နှင့်ကစားရန်လိုအပ်သည်။ အကျိုးရှိသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းသည်စာမျက်နှာတစ်ခုစီအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရမည့်တာဝန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လှည့်! ယခုအနှစ် ၂၀ ကြာပြီးနောက်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤ kobo စာဖတ်သူရှေ့မှောက်၌ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါဟာအရည်တစ်ခုခုနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ပဲ၊ ငါ google ကိုသွားပြီးဒီသတိပေးအမြင်ကိုအနာဂတ်ဝယ်လက်တွေဆီထားခဲ့ဖို့နေရာတွေရှာနေတယ်။ € 20 အတွက်ဒီ shit ကိုမဝယ်ပါနဲ့ !!